ခွေးဘီလူး ကား နဲ့ သင်္ကြန် ရေပက်ခံ ထွက်မယ့် သူများအတွက် သတိထားနိုင်ရန် ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ် - Real Gaming Myanmar
ခွေးဘီလူး ကား နဲ့ သင်္ကြန် ရေပက်ခံ ထွက်မယ့် သူများအတွက် သတိထားနိုင်ရန် ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်
By ei zon /4months ago / Knowledge / No Comments
၁. နောက် အမိုးကိုင်း နပ်တွေ သေချာစစ်ပါ ။ နောက်ဖုံး ဖွင့်ပြီး လည်မယ်ဆို တံခါး သံကြိူးက လူ တက်ခုန်လျှင် ပြတ်ကျ တတ်သဖြင့် နိုင်လွန်ကြိုး ကြိုးဖြင့် သေချာ ထပ်ချည်ပါ ။
၂. အမိုးကိုင်း မပါ နောက်ကန် အလွတ်ဖြင့် လည်မယ် ဆိုပါက သက်ကယ်ဘောင် နပ်တွေကို သေချာ ပြန်စစ်ပါ ။ ထို့နောက် သစ်သားချောင်းဖြင့် သက်ကယ်ဘောင်နှင့် နောက်ဖုံးကို ကြိုးနှင့် သေချာ ချည်ပြီး လည်နိုင် ပါသည် ။
၃. ဝိုက်ဘာ ရာဘာသား မကောင်းလျှင် လဲပါ ။ ဝိုက်ဘာ Link များကို အမဲဆီ သုတ်ပါ ဝိုက်ဘာ ရေဗူး ရေ ဖြည့်ပြီး ရေဖြန်းသီး မှ ရေထွက် မထွက် စစ်ပါ ။
၄. ဒစ်စဘုတ် ရေ မစိုရန် ပလတ်စတစ် အပါးဖြင့် အုပ်ထားပြီး Power စီယာတိုင် ဖြစ်ပါက EPS ဘူး ( စီယာတိုင် ကွန်ပြူတာဘူး ) ကို ရေမစို စေရန် အထူးဂရု စိုက်ပါ ။ ထိုဘူးသည် ရေအနည်းငယ် ထိရုံဖြင့် ပျက်တတ် ပါသည် ။ ရေစိုလည်း ပြန်ခြောက်ရန် မလွယ် ကူသည့် စီယာတိုင်ဂွေ အလှအစွပ်များ ထိုင်ခုံ စွပ်များ ဖြုတ်ထားပါ ။ ထိုင်ခုံ အပေါက် အပြဲ ရှိလျှင် ပလတ်စတစ် အိပ်ဖြင့် စွပ်ပြီး တိပ် သေချာ ကပ်ထားပါ ။ ခေါင်းခန်းတွေ ရေမအိုင် လိုပါက ရာဘာ ခြေခင်းပြား အောက်မှ ရေထွက်ပေါက် ရာဘာ ခေါင်းကို ပြုတ်ထားပါ ။
၅. အဲကလင်ဒါ ပိုက်လိုင် အစ အဆုံးကို ရေ လုံအောင် သေချာ လုပ်ပါ ။ အဝင် ပိုက်ကို ကွန်ကြူးပိုက်နဲ့ ထက်ဆက်ပြီး ရေမမြုပ်နိုင် မဝင်နိုင် တဲ့နေရာ မှာထားပါ ။ ကျန်တဲ့ ဝါရာရိန်း ပိုင်း plug တွေက အော်လာ ကတည်းက ရေလုံပြီးသားပါ ။ အိပ်ဇောကတော့ ရေမြုပ်တဲ့ နေရာ ရောက်ရင် လီဗာကို အကျ မခံနဲ့ နို့မို့ ရေဖိအား များရင်တော့ အင်ဂျင် ကနေ လေးမတွန်း ထုပ်နိုင်ရင်တော့ စက်ရပ် သွားတတ် ပါသည် ။ ဘထ္ထာရီ ခေါင်းတွေကို အမဲဆီ ပွတ်ထား လိုက်ပါ ။ ရေလျှပ် မကူးနိုင်သလို စားလည်း မပေါက်ပါ ။
၆. မှန် အလုံပိတ် အဲကွန်းဖွင့်ပြီး လည်မည် ဆိုပါက Gas ရှိ / မရှိ စစ်ပါ ။ ဂလိုဖန် Fan / AC တိုင်ကီ Fan ပန်ကာကြိုး လျော့ / မလျော့ ဆွေးနေပါက လဲထားပါ ။
၇. ကားမှန် ကားဘော်ဒီများ အပေါ် ရေဂျိုး မတတ်အောင် Glaco spray ကို ကြိုတင် ဖြန်းပါ ။
၈. မိမိ ကိုယ်တိုင် မစစ် တတ်ပါက နီးစပ်ရာ ကားဝေ့ရှော့တွင် သွားရောက် စစ်ဆေးပါ ။
သိထား သင့်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ
MandalayCallCenter မန္တလေးရွှေမြို့တော် နှင့် ပတ်သက်သည့် သိလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ် များအား Mandalay Call Center Hotline 1882 သို့ ၂၄ နာရီ ခေါ်ဆို မေးမြန်း နိုင်ပါသည် ။
ခှေးဘီလူး ကား နဲ့ သွင်ျကနျ ရပေကျခံ ထှကျမယျ့ သူမြားအတှကျ သတိထားနိုငျရနျ ဖျောပွ လိုကျပါတယျ
၁. နောကျ အမိုးကိုငျး နပျတှေ သခြောစဈပါ ။ နောကျဖုံး ဖှငျ့ပွီး လညျမယျဆို တံခါး သံကွိူးက လူ တကျခုနျလြှငျ ပွတျကြ တတျသဖွငျ့ နိုငျလှနျကွိုး ကွိုးဖွငျ့ သခြော ထပျခညျြပါ ။
၂. အမိုးကိုငျး မပါ နောကျကနျ အလှတျဖွငျ့ လညျမယျ ဆိုပါက သကျကယျဘောငျ နပျတှကေို သခြော ပွနျစဈပါ ။ ထို့နောကျ သဈသားခြောငျးဖွငျ့ သကျကယျဘောငျနှငျ့ နောကျဖုံးကို ကွိုးနှငျ့ သခြော ခညျြပွီး လညျနိုငျ ပါသညျ ။
၃. ဝိုကျဘာ ရာဘာသား မကောငျးလြှငျ လဲပါ ။ ဝိုကျဘာ Link မြားကို အမဲဆီ သုတျပါ ဝိုကျဘာ ရဗေူး ရေ ဖွညျ့ပွီး ရဖွေနျးသီး မှ ရထှေကျ မထှကျ စဈပါ ။
၄. ဒဈစဘုတျ ရေ မစိုရနျ ပလတျစတဈ အပါးဖွငျ့ အုပျထားပွီး Power စီယာတိုငျ ဖွဈပါက EPS ဘူး ( စီယာတိုငျ ကှနျပွူတာဘူး ) ကို ရမေစို စရေနျ အထူးဂရု စိုကျပါ ။ ထိုဘူးသညျ ရအေနညျးငယျ ထိရုံဖွငျ့ ပကျြတတျ ပါသညျ ။ ရစေိုလညျး ပွနျခွောကျရနျ မလှယျ ကူသညျ့ စီယာတိုငျဂှေ အလှအစှပျမြား ထိုငျခုံ စှပျမြား ဖွုတျထားပါ ။ ထိုငျခုံ အပေါကျ အပွဲ ရှိလြှငျ ပလတျစတဈ အိပျဖွငျ့ စှပျပွီး တိပျ သခြော ကပျထားပါ ။ ခေါငျးခနျးတှေ ရမေအိုငျ လိုပါက ရာဘာ ခွခေငျးပွား အောကျမှ ရထှေကျပေါကျ ရာဘာ ခေါငျးကို ပွုတျထားပါ ။
၅. အဲကလငျဒါ ပိုကျလိုငျ အစ အဆုံးကို ရေ လုံအောငျ သခြော လုပျပါ ။ အဝငျ ပိုကျကို ကှနျကွူးပိုကျနဲ့ ထကျဆကျပွီး ရမေမွုပျနိုငျ မဝငျနိုငျ တဲ့နရော မှာထားပါ ။ ကနျြတဲ့ ဝါရာရိနျး ပိုငျး plug တှကေ အျောလာ ကတညျးက ရလေုံပွီးသားပါ ။ အိပျဇောကတော့ ရမွေုပျတဲ့ နရော ရောကျရငျ လီဗာကို အကြ မခံနဲ့ နို့မို့ ရဖေိအား မြားရငျတော့ အငျဂငျြ ကနေ လေးမတှနျး ထုပျနိုငျရငျတော့ စကျရပျ သှားတတျ ပါသညျ ။ ဘထ်ထာရီ ခေါငျးတှကေို အမဲဆီ ပှတျထား လိုကျပါ ။ ရလြှေပျ မကူးနိုငျသလို စားလညျး မပေါကျပါ ။
၆. မှနျ အလုံပိတျ အဲကှနျးဖှငျ့ပွီး လညျမညျ ဆိုပါက Gas ရှိ / မရှိ စဈပါ ။ ဂလိုဖနျ Fan / AC တိုငျကီ Fan ပနျကာကွိုး လြော့ / မလြော့ ဆှေးနပေါက လဲထားပါ ။
၇. ကားမှနျ ကားဘျောဒီမြား အပျေါ ရဂြေိုး မတတျအောငျ Glaco spray ကို ကွိုတငျ ဖွနျးပါ ။
၈. မိမိ ကိုယျတိုငျ မစဈ တတျပါက နီးစပျရာ ကားဝရှေ့ော့တှငျ သှားရောကျ စဈဆေးပါ ။
သိထား သငျ့သညျ့ ဖုနျးနံပါတျမြား
MandalayCallCenter မန်တလေးရှမွေို့တျော နှငျ့ ပတျသကျသညျ့ သိလိုသညျ့ ဖုနျးနံပါတျ မြားအား Mandalay Call Center Hotline 1882 သို့ ၂၄ နာရီ ချေါဆို မေးမွနျး နိုငျပါသညျ ။
Previous: ဒီအမှုက မင်္ဂလာ ရှိတဲ့ အမှုလေးပါ ဆိုတဲ့ သင်းသင်း ရဲ့ရှေ့နေ
Next: သင်္ကြန် ကာလ YBS အစီးရေ ၃ ထောင်ကျော် ရပ်နားမည်